Installation manotsi kuti Stainless simbi multistage Centrifugal Pombi - China Shanghai SOG Pumps
Installation manotsi kuti Stainless simbi multistage Centrifugal pombi
The Installation Mamwe Stainless Steel Multistage Centrifugal Pump:
1. Kubva Stainless simbi multistage Centrifugal Michina pombi kugadzwa, kubva kubvisa nyere kunoda kunyatsoteerera chisimbiso ezvinhu, haagoni kuva mutopota vhinza kana leakage, zvikasadaro nayo achaparadza Vacuum dhigirii pamvura Inlet ari pombi, muchiswededza pombi yemvura goho riri neb, kana zvichaita zvakare chakakomba kuzochera mvura. Saka, tinofanira nemwoyo kuita basa rakanaka inowanikwa iri Mapaipi kuitira kuvaka unhu Mapaipi kubatana.
2. Zvinofanira akanongedza kuti kana musoro uye mvura kupisa pamusoro Stainless simbi multistage Centrifugal Pombi uye Mapaipi Centrifugal pombi chokugadza zvakasiyana kubva experimental ezvinhu, kana yomunharaunda pakukwirira riri mamita anopfuura 300 kana pumped mvura tembiricha kwazvo 20 celsius, kuti akaverenga ukoshi anofanira kugadziriswa. Ndiko, mumhepo kumanikidzwa panguva kwakadzikira siyana uye zvine mhute kufurirwa pamusoro mvura tembiricha 20 ° Celsius.However, apo tembiricha mvura iri pasi 20 Celsius, iye zvine hwemvura nevamwe kunogona kuva kunyora nezvavo.
3. Kuti asimbise pombi chokugadza kukwirira (kureva kubvisa). kukwirira Izvi zvinoreva hunyambiri penguva pakati mvura pamusoro uye muzinda-mutsetse kubva pombi impeller. Hazvifaniri kuvhiringidzwa zvinobvumidzwa kubvisa kukwirira. The Vacuum kukwirira akabvumira pamusoro mvura pombi chigadzirwa elucidation bhuku kana nameplate inoratidza Vacuum chamunowana chikamu Inlet mvura pombi. Rakanga kuyerwa zvokurega kuedza pasi kwomuzvarirwo mumhepo kumanikidzwa uye mvura tembiricha 20 Celsius. Hazvina kufunga aibuda mvura mushure kubvisa nyere iri vachiwirirana. Kukwirira pombi chikwata inofanira kuva vemo ukoshi vasara pashure nokubvumira Vacuum kukwirira kuti deducted pashure kurasikirwa kubvisa mutsara kubvisa nyere. Kukwirira pombi chikwata havagoni kusapfuudza akaverenga kukosha. Zvikasadaro, mvura pombi haangavi kupomba.
4. Igaroziva kuti dzaona mutengo ndiwo musoro -loss nokuda mutopota kuramba ari kubvisa nyere. Naizvozvo, zvinokurudzirwa kushandisa pfupi muridzo unoridzirwa urongwa uye dzishandise kugokora Fittings napo. Chinhu kumboadya kuti zvakakodzera kuronga pombi vamwe calibers kuderedza kuerera mwero iri pombi.